China SPC Floor JD-060 Ukukhiqiza kanye nefektri | I-Aolong
Umhlobiso omusha wendlu, phansi phansi komndeni okugcwele esitolo sokhuni, kepha isikhathi eside, ukusonteka phansi kwezinkuni, ukunqotshwa okungahambisani namanzi, manje le nto ithandwa kakhulu emazweni angaphandle, i-realdedehyde yangempela, hhayi ukusonteka, akumangalisi ukuthi kudumile ~
Iphansi le-SPC lenziwe kakhulu nge-calcium powder, eyakhiwa ungqimba we-PUR Crystal Shield obala, ungqimba ongagqoki, umbala wesendlalelo sefilimu, ungqimba we-subcate we-SPC nongqimba oluthambile noluthule. Idume kakhulu emakethe yezangaphandle yokuhlobisa ikhaya, futhi ilungele iphansi lasekhaya.
Iphansi le-SPC enqubweni yokukhiqiza ngaphandle kweglue, ngakho ayiqukethe i-formaldehyde, i-benzene nezinye izinto eziyingozi, i-real 0 formaldehyde floor green, ngeke idale umonakalo emzimbeni womuntu.
Ngoba iphansi le-SPC lakhiwa ungqimba olungagqoki, i-mineral rock powder ne-polymer powder, alwesabi amanzi ngokwemvelo, futhi asikho isidingo sokukhathazeka ngenkinga yokukhubazeka nesikhunta okubangelwa amabhamuza phansi ekhaya. Umphumela ongenamanzi, isikhutha ulunge kakhulu, ngakho-ke kungasetshenziswa indlu yangasese, ikhishi, uvulandi.
Ubuso besitezi se-SPC buphathwa yi-pur Crystal Shield, ngakho-ke inokusebenza okuhle kokushisa okushisayo. Noma ungayinyathela ungafake zicathulo, ngeke kubande. Kuyinto ntofontofo kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ingeza isendlalelo sobuchwepheshe, esinokuguquguquka okuhle. Noma ugoba ama-degree angama-90 kaninginingi, awudingi ukukhathazeka ngokuwa kobuhlungu. Ilungele kakhulu imindeni enabantu abadala nezingane.
Iphansi le-SPC lizoba "yisiphukuphuku" ngemuva kokuhlangana namanzi, okungukuthi, umbango uzokhula, futhi ukusebenza kwe-skid kuhle kakhulu. Ukuqina kwayo kokugqoka nakho kuphezulu kakhulu, okungukuthi, ukusetshenziswa kwensimbi yensimbi phansi emhlane, ngeke kube khona ukuklwebheka, impilo yenkonzo engaphezu kweminyaka engama-20.
Ngaphezu kwalokho, iphansi le-SPC likhanya kakhulu, ngesisindo esingu-2-7.5kg kuphela ngemitha yesikwele, okungu-10% wezinto ezijwayelekile zaphansi. Ingonga ngempumelelo ukuphakama kwesikhala futhi inciphise umthamo wokuthwala wesakhiwo.
Langaphambilini Isitezi se-SPC 1903
Olandelayo: SPC Phansi JD-061